ၾကည့္ရႈသူ (၅)သန္းေက်ာ္ သြားပီျဖစ္ တဲ့ ေဒါက္ဖိနပ္ ျဖင့္ စက္ဘီးစီးၿပီး ျမန္မာအ က တင္ဆက္ သြားတဲ့ အလွမယ္ (႐ုပ္/သံ) – Zartiman
Zar Ti Man | July 24, 2020 | Celebrity | No Comments
Mrs Myanmar (Online Competition) ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို ဘယ္ကိုမွ ခရီးသြားစရာမလိုေတာ့ဘဲ အိမ္မွာေနရင္း ဖုန္းေလး တစ္လုံးရွိ႐ုံနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးမွာ မိမိတို႔ အရည္အခ်င္းေတြကို ထုတ္ေဖာ္ျပသပီး ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အခမ္းနားဆုံး Mrs. Myanmar ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို Online ေပၚကေနပဲ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားရမွာပါ။ အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲတြင္အသက္အ႐ြယ္မေ႐ြးပါဝင္ႏိုင္ၿပီး အသက္ အပိုင္းအျခားအ လိုက္ Winner သရဖူဆုႀကီးေတြ ခ်ီးျမႇင့္ေပးမွာျဖစ္လို႔ အ႐ြယ္(၃)ပါးလုံး အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝသူတိုင္း သရဖူဆြတ္ခူးခြင့္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။
ၿပိဳင္ပြဲဝင္ခြင့္အတြက္ အသက္ အ႐ြယ္ သတ္မွတ္ ထားျခင္း၊ အရပ္၊ကိုယ္အတိုင္းအတာ အေလးခ်ိန္၊ ပညာအရည္အခ်င္း ကန႔္သတ္ ထား ျခင္း မရွိပါေၾကာင္းသိရသည္။ ေရကူးဝတ္စုံ Swimsuit ျဖင့္ ဝတ္ဆင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္လည္း မလိုအပ္ေပ။ သားသမီး ရွိသူျဖစ္ေစ ၊ မရွိသူျဖစ္ေစ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ႏိုင္ပါတယ္။ အပ်ိဳႀကီး မမ တီတီ မ်ားလည္း ၿပိဳင္ပြဲဝင္ႏိုင္ ပါတယ္ (အပ်ိဳႀကီးေတြအတြက္ Ms Myanmar Winner ဆုႀကီးေတြ ေပးအပ္သြားမွာပါ)လွပတင့္တယ္ ထက္ျမက္သည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးတိုင္း Mrs. Myanmar ေ႐ြးခ်ယ္ပြဲ ႀကီး တြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ ပါတယ္။
ေဒါက္ ဖိနပ္ျဖင့္ စက္ဘီးကို လက္လႊတ္စီးျပၿပီး ျမန္မာအကကို ကျပတင္ဆက္ သြားတဲ့ အေကာင္းဆုံး Talent ဆုရွင္ အိမ္ေထာင္ရွင္ အလွ မယ္ Mrs. Pa Pa Htay ဗီဒိယိုမွာပါဝင္တဲ့ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးကေတာ့ Mrs Myanmar (Online Competition S-1) ရဲ႕ အေကာင္း ဆုံး Talent ဆုရွင္ အိမ္ေထာင္ရွင္ အလွမယ္ Mrs. ပပေဌး ပါသူမက အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲမွာ ေဒါက္ဖိနပ္ျဖင့္ စက္ဘီးကို လက္လႊတ္စီးျပၿပီး ျမန္ မာအ ကကို ကြၽမ္းက်င္စြာ ကျပတင္ဆက္ သြားပါတယ္။ ကိုယ္ေတြဆို ကျပပီး စက္ဘီးစီးဖို႔ရာမဆိုနဲ႔ လက္ႏွစ္ဖက္လႊတ္ပီးကို မစီးႏိုင္ ပါဘူး။
သူမ ဘာ့ေၾကာင့္ Skill ေကာင္းလဲဆိုေတာ့ မပပေဌးက ငယ္စဥ္ကတည္းက စက္ဘီးကို ကြၽမ္းကြၽမ္းက်င္က်င္ စီးတတ္သလို ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ အကကိုလည္း အလြန္ပင္ ဝါသနာပါသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ပရိတ္သတ္ႀကီးေရာ မပပေဌးက အေကာင္းဆုံး စြမ္းရည္တင္ဆက္မႈ ဆုကိုဆြတ္ခူးရရွိသြားတာ တကယ္ကိုထိုက္တန္တယ္လို႔ျမင္လား၊ ျမင္တယ္ဆို ေကာမန႔္မွာ Congratulations လုပ္သြားၾကပါအုံးေနာ္။ ၾကည့္ရႈသေဘာက်ႏွစ္သက္တယ္ဆို Like and Share ေလးလုပ္သြားပါအုံးေနာ္…။
Credit : ထန္းညက္ခဲ(ပဲခူးဆား)
Mrs Myanmar (Online Competition) ပြိုင်ပွဲကြီးကို ဘယ်ကိုမှ ခရီးသွားစရာမလိုတော့ဘဲ အိမ်မှာနေရင်း ဖုန်းလေး တစ်လုံးရှိရုံနဲ့ ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ မိမိတို့ အရည်အချင်းတွေကို ထုတ်ဖော်ပြသပီး ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခမ်းနားဆုံး Mrs. Myanmar ပြိုင်ပွဲကြီးကို Online ပေါ်ကနေပဲ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သွားရမှာပါ။ အဆိုပါပြိုင်ပွဲတွင်အသက်အရွယ်မရွေးပါဝင်နိုင်ပြီး အသက် အပိုင်းအခြားအ လိုက် Winner သရဖူဆုကြီးတွေ ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်လို့ အရွယ်(၃)ပါးလုံး အရည်အချင်း ပြည့်ဝသူတိုင်း သရဖူဆွတ်ခူးခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်အတွက် အသက် အရွယ် သတ်မှတ် ထားခြင်း၊ အရပ်၊ကိုယ်အတိုင်းအတာ အလေးချိန်၊ ပညာအရည်အချင်း ကန့်သတ် ထား ခြင်း မရှိပါကြောင်းသိရသည်။ ရေကူးဝတ်စုံ Swimsuit ဖြင့် ဝတ်ဆင်ယှဉ်ပြိုင်ရန်လည်း မလိုအပ်ပေ။ သားသမီး ရှိသူဖြစ်စေ ၊ မရှိသူဖြစ်စေ ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ပါတယ်။ အပျိုကြီး မမ တီတီ များလည်း ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင် ပါတယ် (အပျိုကြီးတွေအတွက် Ms Myanmar Winner ဆုကြီးတွေ ပေးအပ်သွားမှာပါ)လှပတင့်တယ် ထက်မြက်သည့် မြန်မာအမျိုးသမီးတိုင်း Mrs. Myanmar ရွေးချယ်ပွဲ ကြီး တွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင် ပါတယ်။
ဒေါက် ဖိနပ်ဖြင့် စက်ဘီးကို လက်လွှတ်စီးပြပြီး မြန်မာအကကို ကပြတင်ဆက် သွားတဲ့ အကောင်းဆုံး Talent ဆုရှင် အိမ်ထောင်ရှင် အလှ မယ် Mrs. Pa Pa Htay ဗီဒိယိုမှာပါဝင်တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးကတော့ Mrs Myanmar (Online Competition S-1) ရဲ့ အကောင်း ဆုံး Talent ဆုရှင် အိမ်ထောင်ရှင် အလှမယ် Mrs. ပပဌေး ပါသူမက အဆိုပါပြိုင်ပွဲမှာ ဒေါက်ဖိနပ်ဖြင့် စက်ဘီးကို လက်လွှတ်စီးပြပြီး မြန် မာအ ကကို ကျွမ်းကျင်စွာ ကပြတင်ဆက် သွားပါတယ်။ ကိုယ်တွေဆို ကပြပီး စက်ဘီးစီးဖို့ရာမဆိုနဲ့ လက်နှစ်ဖက်လွှတ်ပီးကို မစီးနိုင် ပါဘူး။
Best in Talent ဆုရွင္ Mrs. Pa Pa Htay စက္ဘီးလက္လြႊတ္စီးရင္း ျမန္မာအက ေဖ်ာ္ေျဖမႈ (Mrs Myanmar Online Competition S-1)
BEST IN TALENT WINNER – No (23) Mrs. Pa Pa Htay ဒေါက်ဖိိနပ်ဖြင့် စက်ဘီးကို လက်လွှတ်စီးပြပြီး မြန်မာအကကို ကပြတင်ဆက်သွားတဲ့ Mrs Myanmar 🇲🇲 (Online Competition S-1) ရဲ့ အကောင်းဆုံး Talent ဆုရှင် အိမ်ထောင်ရှင်အလှမယ် Mrs. ပပဌေးCongratulations! 🎊🍾🎈Mrs Myanmar (Online Competition) ပြိုင်ပွဲကြီးကို အိမ်မှာနေရင်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါပြီ… 😳🤩🥳 ယခုပဲ ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့် လျှောက်ထားလိုက်ပါ… ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့ Covid-19 အန္တရာယ်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခမ်းနားဆုံး Mrs. Myanmar ပြိုင်ပွဲကြီးကို Online ပေါ်ကနေပဲ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မယ့် အထူးအခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်အဖြစ် ထူးထူးခြားခြား ကျင်းပသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်… 🥰🥰🥰ဘယ်ကိုမှ ခရီးသွားစရာမလိုတော့ဘဲ အိမ်မှာနေရင်း ဖုန်းလေး တစ်လုံးရှိရုံနဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီး မိမိတို့ အရည်အချင်းတွေကို ထုတ်ဖော်ပြသလို့ ရပါပြီနော်… အသက်အရွယ်မရွေးပါဝင်နိုင်ပြီး အသက် အပိုင်းအခြားအလိုက် Winner သရဖူဆုကြီးတွေ ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်လို့ အရွယ်(၃)ပါးလုံး အရည်အချင်းပြည့်ဝသူတိုင်း သရဖူဆွတ်ခူးခွင့်ရရှိမှာပါ… ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်အတွက် – အသက်အရွယ် သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိပါ။- အရပ် ကန့်သတ် မထားပါ။- ကိုယ်အတိုင်းအတာနှင့် အလေးချိန် သတ်မှတ်မထားပါ။- ပညာအရည်အချင်း ကန့်သတ်ထားခြင်း မရှိပါ။- ရေကူးဝတ်စုံ Swimsuit ဖြင့် ဝတ်ဆင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် မလိုပါ။- သားသမီး ရှိသူဖြစ်စေ ၊ မရှိသူဖြစ်စေ ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ပါတယ်…- အပျိုကြီး မမ တီတီ များလည်း ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ပါတယ်… (အပျိုကြီးတွေအတွက် Ms Myanmar Winner ဆုကြီးတွေ ပေးအပ်မှာပါ…) – ကျက်သရေမင်္ဂလာနှင့် လှပတင့်တယ်ပြီး ထက်မြက်သည့် မြန်မာအမျိုးသမီးတိုင်း Mrs. Myanmar ရွေးချယ်ပွဲကြီးတွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ပါတယ်…အိမ်မှာနေရင်း Online ပေါ်ကနေတဆင့် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် Challenge များစွာကို ပျော်ရွှင်စွာ ယှဉ်ပြိုင်ကြရမှာဖြစ်ပြီး- ပရိတ်သတ်များကိုယ်တိုင်မဲပေးရွေးချယ်နိုင်မယ့် People’s Choice Voting , – ပရိသတ်များ၊ ဒိုင်လူကြီးများ နဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်များ အွန်လိုင်းကနေတဆင့် တွေ့ဆုံကာ ဆင်နွှဲကြရမယ့် Live Chat & Video Call အစီအစဉ်များ,- Women Empowerment ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများ, – Talent စွမ်းရည် တင်ဆက်ယှဉ်ပြိုင်မှုများ,- Interview အစီအစဉ်များ, – အကဲဖြတ် ဒိုင်လူကြီးများရဲ့ အဆင့်ဆင့်ရွေးချယ်မှုများကို- အနုပညာရှင်များရဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများနှင့်အတူ ဆန်းသစ်တဲ့ ရွေးချယ်မှုပုံစံသစ်များဖြင့် ကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်… ပရိသတ်များကလည်း အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ ပြိုင်ပွဲအဆင့်ဆင့်ကို ပြိုင်ပွဲကာလတစ်လျှောက်လုံး ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်… Challengeတွေအတွက် စိတ်ပူပြီး ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ မဝံ့မရဲဖြစ်နေပြီလား? လုံးဝ စိတ်မပူပါနဲ့နော်… ပြိုင်ပွဲတွေ မစခင်မှာ ပြိုင်ပွဲအတွက် လိုအပ်တဲ့ Training များကိုလည်း Online ပေါ်ကနေတဆင့် Pageant Coach ဆရာ , ဆရာမများ၊ နယ်ပယ်အသီးသီးမှ အသိပညာရှင် အတတ်ပညာများက လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်…ပြိုင်ပွဲကြီးကနေ အတွေ့အကြုံသစ်၊ ဗဟုသုတသစ်များစွာရရှိမှာဖြစ်သလို နိုင်ငံနဲ့အဝှမ်း ထူးချွန်ထက်မြက်လှပတဲ့ မိတ်ဆွေသစ်လေးတွေလည်း ရရှိဦးမှာမို့ အင်မတန် အကျိုးရှိစေမယ့် အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်တာကြောင့် လုံးဝ လက်လွတ်မခံသင့်ပါ… 🥰🥰 Mrs. Myanmar (Online Competition) အလှမယ် ရွေးချယ်ပွဲကြီးမှာ ပါဝင်ချင်တယ်ဆိုရင် အမည် အသက် ဖုန်းနံပါတ် နေရပ်လိပ်စာ တို့ကို စိတ်ကြိုက် ပုံ (၃)ပုံနဲ့အတူ Mrs Myanmar (သို့မဟုတ်) Miss Golden Land Myanmar ဖေ့ဘုတ် Message Box သို့ အလွယ်တကူပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါပြီ…ပြိုင်ပွဲကြီးနှင့်ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်း- 09789507050 , 09789507060 တို့ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်သလို Mrs Myanmar ဖေ့ဘုတ်page ရဲ့ Chat Box ကနေတဆင့်လည်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်…ဖောင်တင်ရင် အခြားပွဲတွေနဲ့ မမှားပါနဲ့နော်… Mrs. Myanmar စာလုံး(၂)လုံးထဲပါရှင်… 👑👑 Page အတုတွေ ရှိနေတာကြောင့် Mrs Myanmar နဲ့ Miss Golden Land Myanmar (page) နှစ်ခုလုံးမှာ ဖေ့ဘုတ် တရားဝင်အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ အပြာရောင်အမှန်ခြစ် Blue Tick လေးတွေပါတာကို အထူး သတိပြုပါနော်…ပုံမှားရိုက်ပြီး အတုအပ လိုက်လုပ်ကြမယ့် ပြိုင်ပွဲတွေကို အထူးသတိထားပါ… 🚫အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားအလိုက် Mrs Myanmar (Winner) သရဖူဆုရှင်များကိုCovid-19 အန္တရာယ် ကင်းဝေးသည့်အခါ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဂုဏ်ပြုပွဲအခမ်းအနားကြီးဖြင့် သရဖူ စလွယ်နဲ့ ဆုတံဆိပ်များ ပေးအပ်မှာဖြစ်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရေးများ၊ မီဒီယာအင်တာဗျူးများနှင့် အခြားစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အစီအစဉ်များစွာဖြင့် ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်…ထက်မြက်ပြီး အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ တီတီ, မမ ချောချောလှလှလေးတွေကို ပါဝင်နိုင်ဖို့ Mention ခေါ်ပေးကြရအောင်… ထက်မြက်သည့် မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်လိုသူ အမျိုးသမီးများအတွက် Mrs. Myanmar ရွေးချယ်ပွဲကြီးက နွေးထွေးစွာ စောင့်ကြိုနေပါတယ်…ဒါကြောင့် ယခုပဲ ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ လျှောက်ထားလိုက်ကြရအောင်နော်…#WomenEmpowerment#StayHome
Posted by Miss Golden Land Myanmar on Wednesday, July 15, 2020
သူမ ဘာ့ကြောင့် Skill ကောင်းလဲဆိုတော့ မပပဌေးက ငယ်စဉ်ကတည်းက စက်ဘီးကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် စီးတတ်သလို မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု အကကိုလည်း အလွန်ပင် ဝါသနာပါသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ပရိတ်သတ်ကြီးရော မပပဌေးက အကောင်းဆုံး စွမ်းရည်တင်ဆက်မှု ဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိသွားတာ တကယ်ကိုထိုက်တန်တယ်လို့မြင်လား၊ မြင်တယ်ဆို ကောမန့်မှာ Congratulations လုပ်သွားကြပါအုံးနော်။ ကြည့်ရှုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆို Like and Share လေးလုပ်သွားပါအုံးနော်…။
Credit : ထန်းညက်ခဲ(ပဲခူးဆား)
ပုရိသေတြ ရင္ဖိုလိႈက္ေမာသြား ေစမယ့္ နန္းအမရာ ရဲ႕ အမိုက္ စား အၾကမ္းစားဗီဒိ ယို
မၾကည့္ပဲမေနႏိုင္ေအာင္ ဆက္ဆီက်က် ကျပထားတဲ့ ေမာ္ဒယ္ ေမရတီေဇာ္
ေပ်ာ့ေျပာင္းလွတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ေလးျဖစ္ေအာင္ေလ့က်င့္ခန္းေတြ လုပ္ေနတဲ့ မတ္မတ္သင္ဇာ
အပ်ိဳႀကီးမလုပ္ခ်င္ေပမယ့္ အိမ္ေထာင္မျပဳဘဲ ကေလး ရရင္ လိုခ်င္တယ္လို႔ ဒဲ့ေျပာလာတဲ့ ေမာ္ဒယ္ဖူးပြင့္သခင္(႐ုပ္သံ)